Somaliland: Djibouti Maxay ka Tidhi Casriyaynta Dekadda Berbera - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Djibouti Maxay ka Tidhi Casriyaynta Dekadda Berbera
Dawladda Jabuuti ayaa shaaca ka qaaday mowqifkeeda la xidhiidha maalgashi lagu sameeyo dekadda Berbera, isla markaana sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayaan, taasoo wax ka tari doonta koboca dhaqaalaha Somaliland iyo guud ahaan qaarada Afrika.
Guddoomiyaha Dekedaha Jabuuti Abuubakar Cumar Xadi oo ka hadlay heshiiska maalgashi shirkada DP World ku samaynayso dekadda Berbera ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan sida lagu baahiyey telefishanka Horn Cable TV, waxaanu yidhi “Waxaan si weyn u soo dhoweynayaa maalgashi kastoo lagu sameeyo dekedda Berbera, taasoo la wadaagi doonta fursadaha ganacsi ee Geeska Afrika, Wadamadda Geeska Afrika Waxay u baahan yihiin dekedo badan iyo inay wax badan qabtaan.
Mr. Abubakar Cumar, Guddoomiyaha dekedaha iyo goobaha cashuuraha ka caagan (free Zones) ayaa sheegay in qaarada Afrika ku yaalaan 17 wadan oo aan lahayn baddo iyo dekedo ay wax kala soo degaan, waxaanu yidhi “Dekeda Berbera marka la maalgeliyo waxay fursad u noqon kartaa wadamada aan dekedaha lahayn ee qaarada Afrika, maadama ay jiraan 17 Wadan Qaarada Afrika oo aan lahayn dekedo ay wax kala soo degaan.
Guddoomiyaha Dekedaha dalka Jabuuti ayaa meesha ka saaray warar lagu sheego in dalka Jabuuti walaac ku abuurtay maalgashiga dekeda Berbera “Ma jirto werwer jabuuti ka qabto maalgashiga dekeda Berbera, waanan soo dhoweynaynaa,”:ayuu yidhi Guddoomiyaha dekadaha Jabuuti.
Hadalka Guddoomiyaha Dekedaha Jabuuti ayaa meesha ka saaraya warar hore loola xdhiidhin jiray in wadanka jabuuti ka soo horjeedo maalgashi lagu sameeyo dekeda Berbera, isla markaana xaqiijisay muhiimada ay u leedahay dadka, dalka iyo qaarada Afrika dhammanatood.
“Waxaa Socda Qorshe Ciidammada Kenya Lagaga Saarayo Soomaaliya Oo Lagu Bedelaayo Itoobiyaan…” Wargeyska The Star
US: Maraykanka oo si khaldan u dilay dad u afduubnaa Al Qacida!